असार २९ देखि गोंगबु–सिनामंगल रूटमा टेम्पो र माइक्रो हटाएर ठूला बस चलाइने | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २३ असार २०७५, शनिबार १५:२४ लेखक nepali janta
काठमाडौं । असार २९ देखि गोंगबु–सिनामंगल रूटमा चल्दै आएका टेम्पो र माइक्रो हट्ने भएका छन्। यस रूटमा चल्दै आएका यी साना सवारीलाई ठूला बसले विस्थापित गर्ने भएका हुन्।
यस रूटमा १७ वटा नयाँ बस चल्ने भएका छन्। यी बस चक्रपथको बाटो नभइ हाल माइक्रो र टेम्पो चल्दै आएको भित्री बाटोबाट गुड्ने बस सञ्चालन गर्ने कम्पनी दिगो सहरी यातायात प्रालिले जनाएको छ।
प्रालिका सचिव लालप्रसाद गुरागाईंले बसको प्राविधिक तथा डिपो निर्माणको कार्य सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए।
गुरागाईंका अनुसार यी बस एयरपोर्ट–सिनामंगल–पुरानो बानेश्वर–मैतीदेवी–डिल्ली बजार­ रत्नपार्क–लैनचौर–सामाखुसी हुँदै नयाँ बसपार्क पुग्नेछन्। फर्किने क्रममा नयाँ बसपार्क–गोंगबु–सामाखुसी–गल्कोपाखा–लैनचौर–जमल–कमलपोखरी ज्ञानेश्वर–मैतीदेवी–पुरानो बानेश्वर–सिनामंगल हुँदै एयरपोर्टसम्म पुग्नेछन्।
हाल सिनामंगलदेखि सुन्धारासम्म र नयाँ बसपार्कदेखि सुन्धारासम्म गरी दुई रूटमा टेम्पो र माइक्रो चलिरहेका छन्। यी दुई रूटलाई एकीकृत गरी एउटै रूट बनाएर बस गुडाउन लागिएको गुरागाईंले बताए। बस सेवा सुरू भएपछि यात्रुलाई सहज हुने गुरागाईंको भनाइ छ।
‘दुई वटालाई एकीकृत गरी एउटा रूटमा परिणत गरेर बस चलाउँदा यात्रुलाई सहज मात्र हुने छैन, यसले सो रूटमा सवारी चाप समेत उल्लेख्य रूपमा घट्ने छ’ गुरागाईंले भने।
यी बस २३ सिट क्षमताका छन् भने ५० जना यात्रु ओसार्न सक्छन्।
बसमा सुरक्षा निगरानीका लागि ३ सिसिटिभी, एलइडी टिभी, इन्टरनेटका लागि जिपिआरएस, बस पुगेको ठाउँको जानकारी दिने जिपिएस तथा दुबै ढोकामा सन्देशमुलक डिजिटल बोर्ड रहनेछन्।
यसका साथै बस अपाङ्गमैत्री हुनेछन्।
‘बसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चढ्न र ओर्लन सहज होस् भनेर चार­बाइ­चार साइजमा डिजाइन गरेका छौं’ उनले भने ‘ह्विलचेयरको समेत व्यवस्था गरिएको छ।’
बस चलिरहेको बेला हुन सक्ने चोरी, वादविवाद वा अन्य कुनै आपतकालीन अवस्था आएमा प्रहरीलाई तत्काल खबर गर्न सकियोस् भनेर चालकलाई सञ्चार सेटको उपलब्ध गराइने उनले जनाए।
नयाँ आउने बसमा युरो तीन मापदण्डको इन्जिन प्रयोग हुने भएकाले गुड्दा कार्बन उत्सर्जनको परिमाण समेत न्यून हुने गुरागाईंले दाबी गरे।
यसबाहेक ती बसलाई बन्दको समयमा समेत चलाइने गरी योजना बनाइएको उनले बताए।
‘सरकारी आयोजनाअन्तरगत हामीले बस ल्याउने भएकाले यी बसहरू जुनसुकै हड्तालमा पनि गुड्ने छन्। त्यसका लागि साझाझैं यसमा पनि सरकारले सुरक्षा प्रदान गर्नेछ’, उनले भने। त्यस्तै साझा बसको मोडलझैं यी बस पनि बिहान र बेलुकाको छुट्ने समय एकरूपता हुनेछ भने बस निश्चित डिपोबाटै छुट्ने र बिसाउने गर्नेछन्।
कसको लगानी कति?
गुरागाईंका अनुसार बस खरिद, डिपो निर्माण तथा आवश्यक मर्मत लगायत गरेर १० करोड रुपैयाँको लगानी छ। उत्पादक कम्पनी टाटासँग भएको सम्झौताअनुसार एउटा बसको लागत ४० लाख ९५ हजार परेको छ।
यसका लागि नगर विकास कोषले दिगो सहरी यातायात प्रालिलाई ८ वर्षसम्मको लागि ५ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा कुल लागतको ८० प्रतिशत ऋण उपलब्ध गराएको छ।
अपुग २० प्रतिशत रकममा कम्पनीले ५ प्रतिशत रकम हालेको छ भने काठमाडौं दिगो सहरी आयोजनाले १५ प्रतिशत अनुदान दिएको छ।
‘यो रूटमा गुड्ने माइक्रो र टेम्पो व्यवसायीको भागमा करिब ५० लाख रुपैयाँ परेको छ। अरु रकममध्ये आयोजनाले अनुदान र नगर विकासले सहुलियत दरमा ऋण दिएको छ’, गुरागाईंले भने।
रूटमा चल्ने माइक्रो र टेम्पो के हुने ?
काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजना एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित छ। आयोजनाले काठमाडौंका सबै खाले गरेर करिब २ सय वटा रूटलाई ६६ मा झारेको छ। तीन प्रकारले वर्गीकरण गरी रूट गाँभिएको हो। झारिएको रुट कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभागलाई सिफारिस गरिएको छ।
आयोजनाले दूरी, बाटोको अवस्था, यात्रुको संख्या लगायतका स्थितिलाई ध्यानमा राखेर प्राइमरी, सेकेण्डरी र टर्सरी गरी तीन तहमा रूट वर्गीकरण गरेको छ।
कम्तीमा पनि २७ सिट भएका ठूला बस सहज रूपमा छिर्न सक्ने रूट प्राइमरीमा परेका छन्। यसमा ८ वटा रूट छन्।
सेकेण्डरी रूटमा मध्यम सिट क्षमताका बस सहज रूपमा ओहोरदोहार गर्न सक्ने परेका छन्। यसमा १६ वटा रूट छन्। टर्सरीमा भने टेम्पो, माइक्रो जस्ता साना सवारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसमा ४२ वटा रूटहरु परेका छन्।
यिनै नयाँ ६६ वटा सिफारिस गरिएका रूटहरूलाई आधार मानेर विभागले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा सेकेण्डरीमा परेको गोंगबु–जमल–मैतीदेवी–सिनामंगल रूटलाई अघि सारेको हो। हाल सो रूटमा खण्डीत रूपमा २७ वटा माइक्रो र ३५ वटा टेम्पो चल्ने गरेका छन्। यिनै दुई प्रकारका साना सवारीलाई गाँभेर नयाँ रूटमा ती बसहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो।
खण्डीत रूटलाई एकीकृत गरी नयाँ बस चलाउने भनिएको दिगो सहरी यातायात प्रालिका सचिव गुरागाईं आफैं माइक्रो व्यवसायी हुन्। उनका अनुसार अब ती माइक्रोहरू नयाँ रूटमा चल्नेछन्।
त्यस्तै, हालको सो खण्डीत रूटमा विद्युतीय सफा परिवाहन व्यवसायी संघले सफा टेम्पो गुडाउँदै आएको छ। संघका अध्यक्ष कमल सापकोटाका अनुसार हाल सो रूटमा गुड्ने टेम्पोहरू टर्चरी रूटमा पर्ने भएकाले तिनीहरू पूर्णरूपमा विस्थापित हुनुपर्ने छैन।
सापकोटाले सरकारले टर्चरीमा वर्गीकरण गरेको रूटको वरिपरि नै आफूहरू हाल चलिरहेकाले केही पोइन्ट भने हट्ने छन्।
‘हाल हामी सिनामंगलबाट मैतीदेवी हुँदै सुन्धारासम्मको रूटमा छौं। यसपश्चात हामी रत्नपार्कबाट हालकै भित्री रूट हुँदै तिलगंगासम्म जाने गरी विभागसँग छलफल गरिरहेका छौं, नयाँ बसमा हाम्रो समेत लागनी रहेकाले हामी उत्साही छौं’ सापकोटाले भने।
सापकोटाले सरकाले साना सवारी धनी वा चालकलाई नै सेयर दिएर देशैभरि ठूला बस चलाउनुपर्ने धारण व्यक्त गरे।
‘सरकारले यहाँ जस्तै देशभर साना सवारी चलाक तथा धनीलाई समेत स्वामित्व हुने गरी बस ल्याउनु हो भने सार्वजनिक यातायातको धेरै विकृतिको अन्त्य हुन्छ। ठूला बस हुने हो भने हामी सबैलाई सहज हुने थियो।’
जनता आवास कार्यक्रम: राहतभन्दा आहत बढी
रौतहट । जिल्लामा विपन्न समुदायका लागि भनेर नेपाल सरकारले ०७३-७४ मा एक हजार र ०७४-७५ मा नौ सय घर…
संघीय संसदको अधिवेशन पुस ११ का लागि आह्वान
काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन यही पुस ११ गते बुधबारका लागि आह्वान गरेकी छिन्…
२०१७ : बालबालिकाको लागि भयावह वर्ष, युद्धग्रस्त क्षेत्रहरुका बालबालिकाहरु धेरै प्रभावित !
काठमाडाैं । बालबालिकाहरुलाई भगवान् को प्रतीकको रुपमा मान्नुपर्छ भनिन्छ । जे…
काठमाडौ । पार्टीको नयाँ विधानप्रति असन्तुष्ट कांग्रेसका जिल्ला सभापतिले केन्द्रसँग समन्वय नगरी भेलाको तयारी गरेका छन् ।
उनीहरूको भेला चैत…
चौकीदार मोदी !
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा आफ्नो नाम फेरेर ‘चौकीदार नरेन्द्र मोदी’ राखेका छन् ।…
सृजना बनिन् मिसेज ग्रान्ड
काठमाडौं । ‘मिसेज नेपाल ग्रान्ड २०१९’ को उपाधि सृजना श्रेष्ठले हात पार्न सफल भएकी छिन् । जमलस्थित नाचघरमा भएको…